Mwakpo ụjọ na ndị njem nlegharị anya na Mali Le Campement Kangaba Resort
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Mali » Mwakpo ụjọ na ndị njem nlegharị anya na Mali Le Campement Kangaba Resort
Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Mali • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a
Ndị njem nleta ọdịda anyanwụ nwere mmasị ịnọ na Le Campement Kangaba Resort, ọwụwa anyanwụ nke isi obodo Bamako na Mali bụ ndị amaara n'etiti ndị njem ọdịda anyanwụ nwere ọnụ ụlọ mara mma, nri na-atọ ụtọ ma sie ike, ogige Iden na ọdọ mmiri nrọ.
Taa ụlọ ezumike a ghọrọ ebe dị egwu iji gaa eleta mgbe ndị na-eyi ọha egwu gburu ya. Na ihu ọma, ndị ọbịa ụlọ oriri na ọ 32ụ XNUMXụ XNUMX nwere ike ịgbanahụ ụlọ nkwari akụ ahụ nke ndị na-eyi ọha egwu wakporo egbe. Otú ọ dị, ndị ọbịa abụọ nwụrụ na mwakpo ahụ, otu onye n'ime ha bụ onye France - nwa amaala Gabon.
Dị ka ụlọ ọrụ nchekwa si kwuo, "otu n'ime ndị na-eyi ọha egwu nwere ike ịgbapụ, mgbe merụrụ ahụ". Ọ hapụrụ egbe igwe na karama juputara na "ihe ndị na-agbawa agbawa".
Ozi ahụ kwuru na mmadụ abụọ ọzọ merụrụ ahụ, gụnyere onye nkịtị.
Ndị agha pụrụiche nke Mali tinyere aka, ndị agha UN na ndị agha sitere na ndị agha France na-eyi ọha egwu. Embassylọ ọrụ ndị nnọchi anya mba US dọrọ onye amaala US aka na ntị ka ọ gaa Mali na nso nso a na June 9.